Ịre ahịa chọrọ data dị mma ka ọ bụrụ data-achụso - mgba & Ngwọta | Martech Zone
Ndị ahịa na-enwe nrụgide dị ukwuu ka a na-eduzi data. N'agbanyeghị nke ahụ, ị ​​gaghị ahụ ndị ahịa na-ekwu maka adịghị mma data ma ọ bụ na-ajụ enweghị njikwa data na nwe data n'ime òtù ha. Kama nke ahụ, ha na-agbalịsi ike iji data ọjọọ na-eduzi ha. Ọdachi dị egwu!
Maka ọtụtụ ndị na-ere ahịa, nsogbu dị ka data ezughị ezu, typos, na oyiri ndị a na-aghọtaghị dị ka nsogbu. Ha ga-etinye ọtụtụ awa na-edozi ihie ụzọ na Excel, ma ọ bụ na ha ga na-eme nchọpụta maka plugins iji jikọọ isi mmalite data ma melite usoro ọrụ, mana ha amataghị na ndị a bụ okwu njirimara data nke nwere mmetụta dị egwu n'ofe nzukọ ahụ na-akpata ọtụtụ nde ndị furu efu. ego.
Ndị na-ere ahịa taa juputara na metrik, usoro, akụkọ na nyocha nke na ha enweghị oge iji kpachara anya na ịma aka ịma mma data. Mana nke ahụ bụ nsogbu. Ọ bụrụ na ndị na-ere ahịa enweghị data ziri ezi ịmalite, kedu ka ụwa ga-esi nwee ike ịmepụta mkpọsa dị irè?
Akpọrọ m ọtụtụ ndị na-ere ahịa mgbe m malitere ide ibe a. Enwere m chi ọma inwe Axel Lavergne, Co-nchoputa nke NyochaaFlowz iji kesaa ahụmịhe ya na data dara ogbenye.
Nke a bụ azịza nghọta ya nye ajụjụ m.
Kedu ihe mgba mbụ gị na ogo data siri sie ike mgbe ị na-ewu ngwaahịa gị? M na-edozi engine ọgbọ nyocha ma chọọ nko ole na ole iji leverage ziga arịrịọ nyocha na ndị ahịa nwere obi ụtọ n'oge ọ ga-abụ na ha ga-ahapụ nyocha dị mma.
Iji mee ka nke a mee, otu ahụ mepụtara akara ngosi Net Promoter (NPS) nyocha nke a ga-eziga ụbọchị 30 ka edebanye aha. Mgbe ọ bụla onye ahịa ga-ahapụ NPS dị mma, na mbụ 9 na 10, mechara gbasaa ruo 8, 9, na 10, a ga-akpọ ha ka ha hapụ nyocha wee nweta kaadị onyinye $10 na nloghachi. Ihe ịma aka kasịnụ ebe a bụ na etinyere akụkụ NPS n'elu ikpo okwu akpaaka ahịa, ebe data nọ ọdụ na ngwá ọrụ NPS. Isi mmalite data kwụsịrị na data na-ekwekọghị ekwekọ n'ofe ngwaọrụ ghọrọ ihe mgbochi chọrọ iji ngwaọrụ ndị ọzọ na usoro ọrụ.
Ka ndị otu ahụ gara n'ihu na-ejikọta usoro mgbagha dị iche iche na isi ihe ntinye, ha aghaghị ime ihe iji nọgide na-enwe nkwekọ na data nketa. Ngwaahịa na-etolite, nke pụtara na data ngwaahịa na-agbanwe mgbe niile, na-achọ ka ụlọ ọrụ na-edobe atụmatụ data mkpesa na-agbanwe agbanwe n'oge.
Kedu ihe ị mere iji dozie nsogbu ahụ? Ọ were ọtụtụ ọrụ na ndị otu data iji wulite injinia data kwesịrị ekwesị n'akụkụ akụkụ njikọta. Ọ nwere ike dị mma nke ọma, mana yana ọtụtụ njikọta dị iche iche, yana ọtụtụ mbupu mmelite, gụnyere mmelite na-emetụta usoro ntinye aha, anyị ga-ewu ọtụtụ usoro mgbagha dị iche iche dabere na mmemme, data static, wdg.
Ndị ngalaba na-ere ahịa gị nwere ọnụ na-edozi ihe ịma aka ndị a? Ọ bụ ihe aghụghọ. Mgbe ị na-aga na data otu na a kpọmkwem nsogbu, ị nwere ike na-eche na ọ bụ ihe dị mfe fix na ya na-ewe naanị 1h iji dozie ya ma ọ na-agụnyekarị ọtụtụ mgbanwe ị na-amaghị. N'okwu m akọwapụtara gbasara plugins, isi ihe kpatara nsogbu bụ idobe data na-agbanwe agbanwe yana data nketa. Ngwaahịa na-etolite, ma ọ na-esiri ike idobe atụmatụ data mkpesa na-agbanwe agbanwe ka oge na-aga.
Ya mere ee, maa a na-ekwu na okwu nke mkpa, ma mgbe ọ na-abịa otú mejuputa mmelite wdg ị nwere ike n'ezie ike aka a kwesịrị ekwesị data engineering otu maara na ha ga-emeso nza nke mgbanwe ime ka ọ na-eme, na iji "chekwa" data megide mmelite n'ọdịnihu.
Gịnị kpatara na ndị ahịa anaghị ekwu maka ya data management ma ọ bụ àgwà data n'agbanyeghị na ha na-agbalị ka a na-eduzi data? Echere m na ọ bụ n'ezie ikpe nke amaghị nsogbu ahụ. Ọtụtụ ndị ahịa m kparịtara ụka na-eleda ihe ịma aka nnakọta data anya anya, na n'ụzọ bụ isi, lelee KPI ndị nọworo gburugburu kemgbe ọtụtụ afọ n'ajụghị ha ajụjụ. Mana ihe ị na-akpọ ndebanye aha, ndu, ma ọ bụ ọbụna onye ọbịa pụrụ iche na-agbanwe nke ukwuu dabere na ntọlite ​​​​nsochi gị, yana na ngwaahịa gị.
Ihe atụ bụ isi: ị nweghị nkwado email ọ bụla yana otu ngwaahịa gị na-agbakwụnye ya. Kedu ihe bụ ndebanye aha? Tupu ma ọ bụ mgbe nkwado? Agaghị m ebido ịbanye n'ime ụzọ aghụghọ niile nke nsuso webụ.
Echere m na ọ nwekwara ọtụtụ ihe jikọrọ ya na njiri mara na otu esi ewulite ndị ahịa ahịa. Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-ahụ maka ọwa ma ọ bụ akụkụ nke ọwa, na mgbe ị na-achịkọta ihe onye otu ọ bụla n'ime otu ndị otu njiri mara ọwa ha, ị na-abụkarị 150% ma ọ bụ 200% nke njirimara. Ọ na-ada ụda enweghị ezi uche mgbe ị na-etinye ya otú ahụ, nke mere na ọ dịghị onye na-eme ya. Akụkụ nke ọzọ bụ na nchịkọta data na-agbadatakarị n'ihe gbasara ọrụ aka, na ọtụtụ ndị na-ere ahịa amachaghị ha nke ọma. N'ikpeazụ, ị nweghị ike itinye oge gị n'ịdozi data na ịchọ ozi zuru oke pixel n'ihi na ị gaghị enweta ya.
Kedu ihe bara uru / ngwa ngwa ị chere ndị ahịa nwere ike ime iji dozie àgwà nke data ndị ahịa ha?Tinye onwe gị na akpụkpọ ụkwụ onye ọrụ, ma nwalee otu ọ bụla n'ime oghere gị. Jụọ onwe gị ụdị mmemme ma ọ bụ omume ntụgharị ị na-akpalite na nzọụkwụ ọ bụla. Ihe na-eme n'ezie ga-eju gị anya. Ịghọta ihe ọnụọgụ pụtara na ndụ n'ezie, maka onye ahịa, onye ndu ma ọ bụ onye ọbịa, bụ ihe dị oke mkpa iji ghọta data gị.
Ịre ahịa nwere nghọta miri emi nke ndị ahịa ma na-agbasi mbọ ike inweta nsogbu ịdịmma data ha n'usoro.
Ịre ahịa dị n'obi nzukọ ọ bụla. Ọ bụ ngalaba na-agbasa ozi gbasara ngwaahịa ahụ. Ọ bụ ngalaba nke bụ àkwà mmiri n'etiti ndị ahịa na azụmahịa. Ngalaba na ezi n'eziokwu, na-agba ọsọ show.
N'agbanyeghị nke ahụ, ha na-agbasi mbọ ike na ịnweta data dị mma. Nke ka njọ, dị ka Axel kwuru, eleghị anya ha aghọtaghị ihe data dara ogbenye pụtara na ihe ha na-emegide! Nke a bụ ụfọdụ stats enwetara site na akụkọ DOMO, Ahịa ọhụrụ MO, iji tinye ihe n'echiche:
46% nke ndị na-ere ahịa na-ekwu na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọwa data na isi mmalite mere ka o sie ike ịhazi atụmatụ maka ogologo oge.
30% ndị na-ere ahịa dị elu kwenyere na ngalaba CTO na IT kwesịrị iburu ibu ọrụ nke inwe data. Ụlọ ọrụ ka na-achọpụta ikike nke data!
17.5% kwenyere na enweghị usoro na-achịkọta data ma na-enye nghọta n'ofe otu ahụ.
Ọnụọgụ ndị a na-egosi na oge eruola maka ịzụ ahịa inwe data ma chọọ ọgbọ ka ọ bụrụ nke data na-eduzi ya n'ezie.
Kedu ihe ndị na-ere ahịa nwere ike ime iji ghọta, mata, na ijikwa ihe ịma aka dị mma data?
N'agbanyeghị data bụ ihe ndabere maka ime mkpebi azụmahịa, ọtụtụ ụlọ ọrụ ka na-agbasi mbọ ike imeziwanye usoro njikwa data ha iji dozie nsogbu dị mma.
Na akụkọ site na Evolution Marketing, ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke 82% ụlọ ọrụ ndị nọ na nyocha ahụ merụrụ ahụ site na data adịchaghị mma. Ndị na-ere ahịa enwekwaghị ike imeli nyocha data dị mma n'okpuru akpa ma ọ bụ nwee ike ịghara ịma ihe ịma aka ndị a. Yabụ kedu ihe ndị ahịa nwere ike ime iji dozie nsogbu ndị a? Nke a bụ omume ise kacha mma iji malite.
Omume kacha mma 1: Malite ịmụta maka okwu ịdịmma data
Onye na-ere ahịa kwesịrị ịma ihe gbasara ịdịmma data dị ka onye ọrụ IT ha. Ịkwesịrị ịma nsogbu ndị a na-ahụkarị sitere na ntọala data nke gụnyere mana ọnweghị oke na:
Ederede, mperi mkpope, mperi ịkpọ aha, mperi ndekọ data
Okwu nwere mgbakọ n'ịkpọ aha na enweghị ụkpụrụ dị ka nọmba ekwentị na-enweghị koodu obodo ma ọ bụ iji usoro ụbọchị dị iche iche.
Nkọwa ezughị ezu dị ka adreesị ozi-e na-efu, aha ikpeazụ, ma ọ bụ ozi dị oke mkpa achọrọ maka mkpọsa dị irè
Ozi na-ezighi ezi dị ka aha ezighi ezi, nọmba ezighi ezi, ozi-e wdg
Ebe data dị iche iche ebe ị na-edekọ ozi nke otu onye, ​​mana echekwara ya na nyiwe ma ọ bụ ngwaọrụ dị iche iche na-egbochi gị ịnweta nlegharị anya jikọtara ọnụ.
Megharịa data ebe a na-emegharị ozi ahụ na mberede n'otu ebe data ma ọ bụ n'isi data ọzọ
Nke a bụ ka data adịghị mma na isi mmalite data:
Ịmara onwe gị na usoro dị ka ogo data, njikwa data, na ọchịchị data nwere ike inyere gị aka n'ụzọ dị ukwuu n'ịchọpụta mperi n'ime njikwa mmekọrịta ndị ahịa gị (CRM) ikpo okwu, na site na mgbatị ahụ, na-enye gị ohere ime ihe dịka ọ dị mkpa.
Omume kacha mma 2: na-ebute data ịdịmma ụzọ mgbe niile
Abịara m ebe ahụ, mee ya. Ọ bụ ihe na-achọsi ike ileghara data ọjọọ anya n'ihi na ọ bụrụ na ị ga-egwu ala n'ezie, naanị 20% nke data gị ga-abụ ihe eji eme ihe. Karịrị 80% nke data na-ala n'iyi. Na-ebute ogo ụzọ karịa ọnụọgụ mgbe niile! Ị nwere ike ime nke ahụ site na ịkwalite usoro nchịkọta data gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-edekọ data sitere na ụdị webụ, hụ na ị na-anakọta naanị data dị mkpa ma kpachie mkpa onye ọrụ jiri aka tinye ozi ahụ. Ka mmadụ na-enwekwu 'ịpịnye' na ozi, ọ ga-adị elu karịa ka ọ na-ezite data ezughị oke ma ọ bụ ezighi ezi.
Omume kacha mma 3: Jiri teknụzụ Ogo data ziri ezi
Ị gaghị emefu otu nde dollar iji dozie ogo data gị. Enwere ọtụtụ ngwaọrụ na nyiwe dị n'ebe ahụ nwere ike inyere gị aka nweta data gị n'usoro n'ebughị nsogbu. Ihe ngwaọrụ ndị a nwere ike inyere gị aka gụnyere:
Profaịlụ data: Na-enyere gị aka ịchọpụta mperi dị iche iche n'ime nhazi data gị dịka oghere efu, ndenye oyiri, mperi mkpope wdg.
Nhicha data: Na-enyere gị aka ihicha data gị site n'ịkwalite mgbanwe ngwa ngwa site na ogbenye gaa na nke kachasị data.
Dakọtara data: Na-enyere gị aka ka ị kwekọọ n'usoro data na isi mmalite data dị iche iche wee jikọta/jikọta data sitere na isi mmalite ndị a ọnụ. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike iji egwuregwu data jikọọ ma isi mmalite data dị n'ịntanetị na nke na-anọghị n'ịntanetị.
Nkà na ụzụ dị mma data ga-enye gị ohere ilekwasị anya n'ihe dị mkpa site na ilekọta ọrụ na-adịghị arụ ọrụ. Ị gaghị echegbu onwe gị maka igbu oge iji dozie data gị na Excel ma ọ bụ n'ime CRM tupu ịmalite mkpọsa. Site na ijikọ ngwaọrụ dị mma data, ị ga-enwe ike ịnweta data dị mma tupu mkpọsa ọ bụla.
Omume kacha mma 4: tinye aka na njikwa ndị agadi
Ndị na-eme mkpebi na nzukọ gị nwere ike ha agaghị ama nsogbu ahụ, ma ọ bụ ọ bụrụgodị na ha dị, ha ka na-eche na ọ bụ nsogbu IT na ọ bụghị nchegbu ahịa. Nke a bụ ebe ịkwesịrị ịbanye n'ịtụpụta azịza. Data ọjọọ dị na CRM? Data ọjọọ sitere na nyocha? Ihe ọjọọ ndị ahịa data? Ihe ndị a niile bụ nchegbu ahịa na enweghị ihe jikọrọ ya na ndị otu IT! Ma ọ gwụla ma onye na-ere ahịa na-agbago na-atụ aro idozi nsogbu ahụ, òtù dị iche iche nwere ike ime ihe ọ bụla gbasara àgwà data.
Omume kacha mma 5: Chọpụta nsogbu na ọkwa isi mmalite
Mgbe ụfọdụ, nsogbu data adịghị mma na-akpata site na usoro adịghị arụ ọrụ. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ihichapụ data n'elu, ọ gwụla ma ị chọpụtaghị ihe kpatara nsogbu ahụ, ị ​​​​ga-enwe nsogbu otu àgwà ahụ na ikwugharị.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-anakọta data ndu site na ibe ọdịda, ma ị chọpụta na 80% nke data nwere nsogbu na ndenye nọmba ekwentị, ị nwere ike mejuputa njikwa ntinye data (dị ka itinye mpaghara koodu obodo amanyere iwu) iji hụ na ị' na-enwetakwa ezi data.
Ihe na-akpata ọtụtụ nsogbu data dị mfe idozi. Naanị ị ga-ewepụta oge iji gwuo omimi wee chọpụta isi okwu wee gbakwuo mbọ dozie nsogbu ahụ!
Data bụ ọkpụkpụ azụ nke ọrụ ahịa
Data bụ ọkpụkpụ azụ nke ọrụ ahịa, mana ọ bụrụ na data a ezighi ezi, zuru oke, ma ọ bụ nke a pụrụ ịdabere na ya, ị ga-atụfu ego maka mmejọ dị oke ọnụ. Ọdịmma data ejedebeghị na ngalaba IT ọzọ. Ndị na-ere ahịa bụ ndị nwe data ndị ahịa na ya mere ha ga-enwe ike ịmepụta usoro ziri ezi na nkà na ụzụ iji nweta ihe mgbaru ọsọ ha na-ebute data.
Tags: CRMdataogo datadata-chụpụrụmarketingimeri
Farah Kim bụ onye na-ere ngwaahịa dabere na mmadụ bụ ọkachamara n'ime ka ozi dị mgbagwoju anya dị mfe ka ọ bụrụ nghọta nwere ike ime maka ndị na-ege ahịa azụmaahịa. Ọ na-amasị ya na njikwa data ma na-achọ inyere ụlọ ọrụ aka imeri adịghị arụ ọrụ nke ọma site na omume njikwa data adịghị arụ ọrụ.